Baashe Cabdulaahi Maxamuud Aw-cusmaan oo ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Cabdulaahi Xaaji Maxamuud ( Cabdulaahi Insaaniya) | puntlandi.com
Baashe Cabdulaahi Maxamuud Aw-cusmaan oo ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Cabdulaahi Xaaji Maxamuud ( Cabdulaahi Insaaniya)
Baashe Cabdulaahi Maxamuud Aw-cusmaan oo kamid ah Isimada Puntland, ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid allaha unaxariistee, Cabdulaahi Xaaji Maxamuud ( Cabdulaahi Insaaniya), oo ahaa qoraa Soomaalieed oo caan ah.
Marxuumka oo labo cishe ka hor ku geeriyooday dalka Maraykanka ayaa sidoo kale kasoo mid noqday barlamaanadii ugu horeeyay ee Soomaaliya, waxaa kale oo lagu xasuustaa in uu ahaa shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee luuqal Carabiya ku qoray buugaag badan oo taariikhiya.
Sidoo kale wuxuu xubin ka ahaa guddigii qorista farta Soomaaliya, sannadkii 1971.
Baashi Cabdulaahi oo lasoo xiriiray warsidaha Puntlandi, ayaa sheegay marxuumku inuu aqoon durugsan u lahaa, isagoo ku sifeeyay inuu ahaa nin ehlu Diin ah, xushmad ku dhex lahaa ummadda Soomaaliyeed islamarkaana tan iyo xoriyadii kahor Soomaaliya usoo shaqeynayay.
Wuxuu baashigu uga tacsiyeeyay eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay marxuumka, isagoo Eebbe uga baryay inuu jannadii fardowso ka waraabiyo, qoyskiisana uu samir kasiiyo. Waxaa uu si gaar ah ugu tacsiyeeyay gabadhiisa Shukri Cabdulaahi Insaaniyo oo ah safiirka Soomaaliya ee Switzerland iyo walaalahiis ilma Sheikh Xasan.